ZOMA 16 AOGOSITRA 2019
TOAMASINA : Kandidà sady filohan’ny fikambanana iray depiote iray nandrahona mpanao gazety
R.M. filohan’ny fikambanana iray ao Toamasina ary nirotsaka ho kandidà solombavambahoaka. Ny sabotsy 9 marsa, nisy sary navoakan’i R.M. tao anaty kaonty facebook-ny fa vita soa aman-tsara ny fametrahana taratasim-pilatsahan-kofidiana natao teo anivon’ny Ovec Toamasina I. 13 mars 2019
Rehefa nanontaniana ny teo anivon’ny Ovec, dia nilaza fa tsy mbola nametraka taratasim-pilatsahan-kofidiana izany mihitsy ilay milaza fa kandidà. Maro tsy feno ny antontan-taratasy nentiny ka naleonay nasaina nentiny niverina aloha, hoy hatrany ny fanazavana any amin’ny mpiandraikitra ao amin’ny Ovec Toamasina I. Navoakan’ilay mpanao gazety tao anaty tambajotra sosialy izany lainga sy famitaham-bahoaka nataon’ity mpanao politika iray ao Toamasina ity izany.
Ny andron’ny talata 12 marsa, teo am-panangonana vaovao teny amin’ny biraon’ny Ovec Toamasina I, dia tonga nivatravatra tamin’ ilay mpanao gazety nanao be fiavy sy nanao fandrahonana i R.M. Tsy nahatanty tratra tamin’ny marina izy. Vaovao marim-pototra avokoa mantsy no nivoaka momba azy.
Nampahatsiahy ireo lahatsoratra efa natao momba azy nivoaka an-gazety nataon’ilay mpanao gazety ity mpanao politika nilaza fa kandidà ho solombavambahoaka ity. Momba ny fakàna fako izay efa nivoaka vaovao fa misy tetikasa momba ny fakàna fako ao Toamasina ataony izay naharaisana fitarainana maro. Be tamin’ireo tokantrano no mitaraina fa ny vola lasany fa ny fako tsy afaka.
Nisy nahazo sary ilay fandrahonana nataony an’ilay mpanao gazety. Horonantsary izay efa miparitaka amin’ny tambajotra sosialy maro ao Toamasina ankehitriny. Izany ve no mba fihetsiky ataon’olona ho mpanao lalàna hisolovava an’i Toamasina, hoy ny fanehoan-kevitra ao an-drenivohitr’i Betsimisaraka. R.M, izay efa mpiara-miasa akaiky tamin’ny fitondrana Hvm ka tsy nahagaga loatra izao fihetsika izao. Ny talata 12 marsa lasa teo moa vao tena tonga nanatitra ny antontan-taratasiny feno i R.M.
Niely ny feo momba halatra taova, ramatoabe iray saika niharan’ny fitsaram-bahoaka AMBOLOMADINIKA TOAMASINA (119) 12 août 2019 Ifandroritana ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra VOVONAN’NY MPANOHITRA (100) 12 août 2019 Dahalo miisa telo lavon’ny fokonolona tany amin’ny Distrikan’i Betroka FIKASANA FAKANA AN-KERINY (94) 13 août 2019 Nohavaozina ny lalàna mifehy ny sora-piankohonana MINISITERAN’NY ATITANY (71) 12 août 2019 Lasibatra indray ny fianakaviamben’ny mpanao gazety TSY FANDRIAMPAHELAMANA AO TOAMASINA (60) 12 août 2019 Olona miisa 5 saron’ny zandary, mitohy ny famotorana FAHATRATRARANA VOLA SANDOKA (57) 16 août 2019